Apple haizorore uye inozivisa nhau dzePodcasts app | IPhone nhau
Teerera, teerera: iyo Podcasts app ichakurumidza kusanganisira hukuru hwekuvandudza
iTunes neApple's Podcasts application ndiyo nzvimbo dzakanakisa dzekuteerera ma podcast ako nekukurumidza uye nyore, asi kwete izvozvo chete, ivowo chikuva chikuru chekuparadzira wavo pasi rose. Kwemakore, ichi chave chiri chikuru chishandiso kushambadzira uye kugovana matsva matsva, uye zvinoita sekunge ichi ndicho chinhu icho kambani yeCalifornia yakatsunga kusundidzira zvakare kuti iite iyo chikuva kunyangwe ichifanira.
Kushandiswa kwe Podcasts yakagadziridzwa neIOS 11 (sezvatakakuudza iwe mukati vhidhiyo iyi) Uye ikozvino inopa chifananidzo zvakanyanya zvinoenderana neese masisitimu uye, pamusoro pazvose, neApple Music, chimwe chikumbiro chakanangwa kutamba zvirimo zvemavhidhiyo. Iye zvino hazvisi izvo chete zviri nyore kuti urambe uchifambirana nezvazvino zvikamu zveyaunofarira podcast, zvichave zvakareruka kuve neruzivo rwakanaka pese paunopinda muapp. Asi shanduko hadzisi chete muchikamu chekushongedza.
Pakati pezuva ranezuro, zuva rekupedzisira reWWDC, Apple yakapa hurukuro mairi yakaratidza zvimwe nezveramangwana rekushandisa kwePodcasts. Shanduko dzinouya ichaitirwa kuti vashandisi vakwanise kuteedzera ma podcast ako neimwe nzira yakajeka (dhawunirodha mwaka uzere, tevera mukutevedzana ...) uye kupa vanogadzira mamwe maturusi ekuti vasarudze munzira yavanoda kuti zvikamu zviratidzwe kune vateereri uye vawane dhata rekuongorora pamusoro pavo (nemwaka, kubva kune achangopfuura kusvika mazhinji zvichangoburwa) .chinyakare kana zvinopesana, shambadza matrailer ...).
Seti yezvose nhau dzatichaona dzichiitwa mumwedzi iri kuuya ichaona hutungamiriri nyowani yeapp inosarudzwa kana zvasvika kumaPodcasts. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, iwe unogona kuona iyo vhidhiyo yechikamu cheWWDC ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Teerera, teerera: iyo Podcasts app ichakurumidza kusanganisira hukuru hwekuvandudza
Yakarasika yekuteerera yekutamba iri kuuya zviri pamutemo kuIOS 11